32 bit or 64 bit လား ? ~ မျိုးကို
32 bit or 64 bit လား ?
18:34 Technique, Window7No comments
ဒါလေးက သိပီးသားသူများ အတွက်တော့ အရမ်းကို ရယ်စရာ ကောင်းမှာပါ..။ဒါပေမယ့် ကိုယ့် ကွန်ပျူတာ ရဲ့ Properties ကို မေးလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ မသိတဲ့ သူများ အတွက်ပါ..။အထူးသဖြင့် 34 bit လား ၊ 64 bit လားဆိုတာ မသိသေးတဲ့ သူများ အတွက်ပါ ...။
1. Start Menu က Computer ကို Right Click နှိပ်ပီး Properties ကိုသွားလို့ ရပါတယ်..။
2.Window ရဲ့ Shortcut ကိုသုံးချင်တယ် ဆိုရင်တော့ Win Key +Pause Break ကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်း သူ့ ရဲ့ Properties ကို ရောက်နိုင်ပါတယ်..။